50 Naqshadeeyayaasha oo La Raacayo Twitter | Abuurista khadka tooska ah
Carlos Sanchez | | La cusboonaysiiyay 29/08/2013 17:00 | General, Khayraadka
Twitter Waa hub aad u awood badan haddii aan ogaanno sida saxda ah ee loogu isticmaalo, shaqsiyanna wax badan buu iiga caawiyey markay noqoto helitaanka tixraacyo iyo dhiirrigelin markay tahay qaabeynta.
Wiilasha WebDesignLedger Waxay sameeyeen isku-dubaridka konton naqshadeeyayaal iyo barnaamijyo raacaya Twitter-ka Waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan saameynta ay ku leedahay adduunkan, anigana horay ayaan uga shaqeynayay.
Gary Thomas - (9waxaan) Waxaan hayaa tweets waxyaabo qabow oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha webka.
Aaron Irizarry - (aaroni268) waa Naqshadeeyaha Khibrada Isticmaalaha ee Harte-Hanks / PennySaver.
Angie Bowen - (angbowen) waa naqshadeeye web / horumariye ka yimid Colorado.
Adam Smith - (atsmith) waa madaxweynaha iyo agaasimaha hal abuurka 'Advent Creative'.
Andrew Wilkinson - (awilkinson) waxay maamushaa wakaaladda qaabeynta isdhexgalka MetaLab.
Barry Madden - (BarryMadden) waa shabakad iskaa wax u qabso ah / GUI / naqshadeeye garaaf ah
Brian Gardner - (bgardner) waa aasaasaha iyo Maamulaha StudioPress.
Brian K. McDaniel - (bkmacdaddy) waa shabakad iyo naqshadeeye garaaf leh oo ka socda San Francisco.
Paul Boag - (boagworld) aasaasay wakaaladda naqshadeynta websaydhka Headscape waxayna maamushaa boagworld.
Brad Colbow - (bradcolbow) waa naqshadeeye degel madaxbanaan oo waliba sameeya maqaal majaajilo toddobaadle ah.
Brian Cray - (briancray) waa ganacsade reer webbus ah oo lataliye ah.
Rachael Furn - (calmbanana) waa horumariyaha webka ee fadhigiisu yahay Northants, UK.
Chetan R - (cheth) waa naqshadeeye websaydh Hindi ah / naqshadeeye.
Chris Spooner - (chrisspooner) waa Naqshadeeye ku saleysan Seattle iyo blogger fadhigiisu yahay Sheffield, UK.
Liz Andrade - (cmdshiftdesign) waa web / naqshadeeye naqshadeeye iyo blogger joogto ah.
Collis - (collis) waa Maamulaha Guud / Aasaasaha Envato.
Walter Apai - (DesignerDepot) waa naqshadeeye websaydh oo maamula Bakhaarka naqshadeeyaha Webka.
Emma Taylor - (emtaylor) waa naqshadeeye shabakad madaxbanaan oo fadhigeedu yahay Qubrus.
Hannah - (ErisDS) waa horumariye PHP oo fadhigiisu yahay Northampton, UK.
Mike Rundle - (xaragada) waa horumariye softiweer oo ku saleysan Raleigh.
Glenn Hilton - (glennhilton) waa naqshadeeye websaydh / horumariya ku saleysan Vancouver.
Gopal Raju - (gopalraju) waa naqshadeeye web ku saleysan hindiya / horumariyaha iyo blogger.
Grace Smith - (gracesmith) waa naqshadeeye websaydh / horumariya oo waliba socodsiiya thefreelancefeed.com.
Janko Jovanovic - (jankowarpspeed) waa naqshadeeye UI, injineer softiweer, blogger, afhayeen iyo farshaxan.
Dainis Graveris - (1stwebdesigner) waa naqshadeeye degel oo socodsiiya www.1stwebdesigner.com.
Jason Walz - (jasonwalz) waa naqshadeeye web ku saleysan Milwaukee.
Jeff Croft - (jcroft) waa naqshadeeye websaydha Seattle ku salaysan / horumariya oo waliba qoray buugaag.
John O'Nolan - (JohnONolan) waa naqshadeeye web ku saleysan Boqortooyada Midowday oo si joogto ah wax uga qora bogag badan oo kala duwan.
Jon Phillips - (jophillips) waa naqshadeeye websaydh ka shaqeeya Sprye Studios.
Liam McKay - (liammckay) waa naqshadeeye web ku saleysan Boqortooyada Midowday oo hadda ka shaqeeya WPBundle.
Mark Jardine - (markjardine) waa San Jose ku saleysan oo naqshadeeye u shaqeeya Tapbots.
Marko Prljic - (markoprljic) waa naqshadeeye web ku saleysan Croatian oo aasaasay Twinkle Tap.
Meagan Fisher - (meaganfisher) waa naqshadeeye websaydh ku saleysan Salem oo ka shaqeeya SimpleBits.
Mike Lane - (mlane) waa naqshadeeye UX oo deggan Minneapolis.
Ronald Bien - (naldzgraphics) waa naqshadeeye farshaxan Filibiin ku saleysan iyo sidoo kale aasaasaha Naldz Graphics.
Nishan Joomun - (nishanjoomun) waa naqshadeeye web ku saleysan Montreal.
nourayehia - (nourayehia) waa naqshadeeyaha websaydhka oo sidoo kale aasaasay Noupe iyo Bundle Hunt
David Perel - (obox) waa naqshadeeye web ku saleysan Koonfur Afrika iyo aasaasaha shirkadda Obox.
Amélie Husson - (othella) waa naqshadeeye web ka France laakiin hadda ku sugan Jarmalka.
http://www.twitter.com/paddydonnelly waa naqshadeeye websaydh Irish ah oo hadda ku sugan Belgium.
Rob Hawkes - (robhawkes) waa horumariye web ku saleysan UK.
Rogie - (rogieking) waa naqshadeeye web ku saleysan Montant iyo aasaasaha Komodomedia.
Veronica Domeier - (ronicadesign) waa naqshadeeye websaydh madaxbanaan oo ku yaal San Antonio.
Sarah Parmenter - (sazzy) waa naqshadeeye web ku saleysan Boqortooyada Midowday oo aasaasey Waad Ogtahay Yaa.
Thomas Ulbricht - (wadaag maskaxda) waa shabakad deigner oo fadhigeedu yahay Jarmalka, wuxuu kaloo aasaasay Sharebrain.
Jacob Gube - (lix faallo) waa horumariye / naqshadeeye websaydh, wuxuu kaloo aasaasay Lix Dib-u-eegis isla markaana isla aasaasay Naqshadeynta Naqshadeynta
Luca Soffici - (Soffici) waa websaydh talyaani ah & naqshadeeye garaaf ah.
Tom Kenny - (tkenny) waa naqshadeeye websaydh UK ah / horumariye wuxuuna aasaasay 'Inspect Element'.
Tony Chester - (tanychester) waa naqshadeeye web ka Cary iyo milkiilaha OnWired.
Umut Muhaddisoglu - (umutm) waa soo saare web iyo blogger ka yimid Turkiga.
Liiskani wuxuu ahaa qayb yar oo ka mid ah bulshada naqshadeynta websaydhka waxaa jira 100s haddii kale 1000 ee naqshadeeyayaal badan oo mudan in la raaco markaa xor u noqo inaad ka tagto faallooyin leh xiriiriye xiriiriyahaaga bogga twitter-ka haddii aad u malaynayso inaad mudan tahay inaad raacdo!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 50 Naqshadeeyayaasha inay Raacaan Twitter